Habka ugu fudud ee Root Nexus 6 - Just 3 Talaabada Simple
MAWDUUCA Root Android Devices
Flash ROM ah si ay Android
Sababaha ayaa la diiday in la xidid Android
Waxyaabaha la sameeyo ka hor soo afjarno Android
Sababo xidid Your Android Phone
Sida loo xidid Your Samsung Galaxy S4 (Isticmaalka Oden iyo CWM)
Sida loo xidid Samsung Galaxy S2 I9100 la 2.3.6 Android
Sida loo xidid Galaxy S3 mini I8190 / I8190L / I8190N / I8190T
3 Talaabada Sahlan ee Root Nexus 6
Sababo xidid Nexus 6
Waa runtii la yaab leh in ay leeyihiin Nexus 6 dhow dahay, ma aha oo kaliya loo isticmaalo sida telefoon ah in ay wacaan, saaxiibada qoraalka, laakiin sidoo kale sida kiniin ah inuu ciyaaro kulan, akhri eBooks, xitaa waraaqaha aragtida for shaqada. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan rujin aad Nexus 6, waxaad dhici karta in aan loo oggolaan in uninstall ee Chine pre-rakibay waxay ku, rakibi app kasta oo aad jeceshahay, soo dajiyo ugu dambeeyay ama qoraalkii Android aad jeceshahay iyo kor loogu qaado nolosha batteriga.
Sida loo rujin Nexus 6
Sababo la xiriira sababaha kor ku xusan, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ka rujin Nexus 6. Sure, ayaa waxaa jira siyaabo kala duwan oo soo bandhigay internet-ka si aad u sameeyo Nexus 6 rooting. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo iyaga ka mid ah sameeyo xididka via biligleynaya ROM cusub si aad Nexus 6, taas oo aad Nexus 6 galay halista gelin doonaa, sida lagu bricked iyo iska ilaalinta damaanad. Ka hor inta soo afjarno aad Nexus 6, weeyna u maleeyeen in aad u malaynayso in labo jeer. Waxaan u soo jeedin kartaa in aad isku daydo habka ugu nabad badan xididka Nexus 6 - isticmaalaya One-click feature Root ee Wondershare MobileGo . By isticmaalkiisa, marnaba ma waayi doonaa macluumaadka aad ku Nexus 6, saarta Nexus 6 galay leben, ama wax kama jiraan ay damaanad. Oo waxaa kaliya oo aad qaadataa 3 tallaabooyinkan fudud si aad xididka Nexus 6. Check out tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 1. Download MobileGo in aad Windows PC oo ku xidh. Hadda, MobileGo oo keliya ka shaqeeya PC ku salaysan nidaamka ka hawlgala Windows. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, waa in aad u isticmaasho in nidaamka qalliinka Windows dalwaddii aad Mac. Ka dib markaas, waxaa isla markiiba ay maamulaan.
Tallaabada 2. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad Nexus 6 aad computer. Si aad u samayso barnaamijka ogaado aad Nexus 6, waa in aad awood u debugging USB ku saabsan Nexus 6: Settings> About phone> tirada dhista tuubada 7 jeer. In Developer Options, shid debugging USB iyo riix OK. Marka xiran si guul ah, waxaad ka arki kartaa daaqadda MobileGo u eg shaashadda hoose. Mise waxaad isku dayi kartaa in ay ku xidhmaan aad Nexus 7 la MobileGo via Wi-Fi.
Tallaabada 3. Guji ah 'One-Guji Root' button dhinaca midig ee suuqa, daynin MobileGo samayn ku Nexus 6 rooting aad u. Daaqadda pop-up ka, guji "Ok" si loo xaqiijiyo rooting ah. Waxa aad qaadan doontaa dhowr daqiiqo illaa xidid Nexus 6. Ha welwelin! Just samir iyo aad Nexus 6 xiran your computer inta ay socoto rooting ah Nexus 6.
Eeg sida sahlan waa in ay ka rujin Nexus 6. Waa maxay sababta aan kala soo bixi MobileGo in ay isku dayaan keligaa.
5 Talaabada inuu ka soo kabsado Photos, Xiriirada, fariimaha qoraalka iyo More ka Nexus 6
Root Android 5.0 hurdiga ah - Waa Sidaas Easy